किन रोकियो गोविन्द केसीलाई रेस्क्यु गर्न जान लागेको सेनाको हेलिकप्टर? :: PahiloPost
किन रोकियो गोविन्द केसीलाई रेस्क्यु गर्न जान लागेको सेनाको हेलिकप्टर?
11th July 2018, 05:14 pm | २७ असार २०७५
काठमाडौं: डा गोविन्द केसीलाई ‘रेस्क्यु’ गर्न जुम्ला जान लागेको हेलिकफ्टर एनएमएले प्रतिनिधि नपठाएपछि रोकिएको छ। सरकारको क्याबिनेट डाक्टर मिर्गौला रोग विशेषज्ञ दिव्या सिंह र नेपाल मेडिकल एशोसियसन(एनएमए)का प्रतिनिधी हेलिकोप्टर लिएर रेस्क्युका लागि जुम्ला जाने तय भएको थियो।
डा केसीलाई रेस्क्यु गर्न नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयार गरिएको थियो। तर सिंह भने मौसमको खराबीको कारणले जुम्ला जान नसकेको बताउँछिन्।
सरकारले वार्तामा चासो नदेखाएका कारण डा केसी काठमाडौं आउन मान्ने सम्भावना कमजोर रहेकाले संघका एक प्रतिनिधिले बताए। भने, 'सरकारले माग पुरा गर्ने वाचा नगरेसम्म उहाँ मान्नुहुन्न होला। त्यसैले सरकारी टोलीसँग जाने नजाने टुंगो लागेको छैन।'
किन रोकियो गोविन्द केसीलाई रेस्क्यु गर्न जान लागेको सेनाको हेलिकप्टर? को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।